Madaxweynaha Puntland oo Madaxtooyada ku qaabilay wafti ka socda Turkiga (Sawiro) – Radio Daljir
Oktoobar 1, 2012 4:33 g 0
Madaxweynaha dawlada Puntland Cabdiraxmaan Sh Maxamed Faroole ayaa maanta (Isniin Oct 1-2012) aqalka Madaxtooyada ee magaalada Garoowe ku qaabilay wafti ka socda dalka Turkiga oo dhowaan soo gaarey deegaanada Puntland.
Waftiga ka socda dalka Tukiga ayaa sabtidii lasoo dhaafay kasoo degey Garoonka Diyaaradaha ee magaalada Boosaaso,waxayna Madaxweyne Faroole ka wada hadleen Socdaalkooda deegaanada Puntland iyo Mashaariic ay ka hirgelin doonaan deegaanada Puntland.
Dalka Turkiga oo taageero badan siiyey Somalia wax weyna ka qabtay koonfurta Somalia ayaa xiligan taageeradiisa gaarsiinaya gobolada Nabdoon ee dalka sida Puntland iyo Somaliland.
Xuquuqda Sawirka: Xafiiska Madaxweynaha.
Daawo Sawirada Soo dhoweynta Madaxweyne Xasan Sh Maxamuud ee magaalada Baydhabo.